Vietnam " Journey-Assist - Mahaliana any Vietnam. Fampiasa mahasoa
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » i Vietnam
Sarintany mahaliana momba ny zava-mahaliana sy torapasika any Vietnam
Vietnam. Fampahalalana ankapobeny
Vietnam dia lasa firenena fizahan-tany marobe. Betsaka ny mpizahatany avy any Rosia sy ireo firenena sovietika taloha ankehitriny. Ity firenena ity dia nivadika ho mahaliana indrindra ho an'ireo izay efa nitsidika ireo firenena hafa tany Azia atsimo atsinanana, voalohany indrindra, i Thailand izay be mpitia indrindra. Na izany aza, Vietnam dia hafa noho ny farany. Vietnam dia tsy dia manana fialamboly firy ary rivo-piainana tsy dia milamina.
Amin'ity firenena ity, be dia be ary saika ny rehetra dia azo jerena ihany, misy toe-javatra mafonja kokoa. Amin'ny lafiny maro, somary ambany kokoa noho i Thailandy sy ny firenena sasany any Azia Atsinanana i Vietnam: ny fampandrosoana ny sehatry ny fizahan-tany dia tsy misy fivoarana, tsy misy fanafody manokana manara-penitra, ary tsy midadasika loatra ny toerana fanaovana varotra (na dia somary mihena kely aza ny vidiny raha oharina amin'i Thailand sy ny firenena hafa any amin'ny faritra) ary na dia ny toerana ara-tantara aza dia kely kokoa aza.
Rosiana any Vietnam
Ara-bakiteny 10 taona lasa izay, tsy mora ny nihaona tamin'ny olona miteny Rosiana tany Vietnam, ary raha nanao izany izy ireo, matetika dia tao amin'ireo toeram-pialofana malaza (Nha Trang sy Mui Ne) no nisy azy. Arak'izany, ny famantarana sy ny menus misy soratra amin'ny teny Rosiana dia tena tsy fahita firy koa. Na izany aza, maro ny toeram-pialan-tsasatra eto amin'ity firenena ity no lasa Russia tanteraka. Ao Nha Trang sy Mui Ne, misy takelaka amin'ny teny rosiana ireo fambara, anisan'izany ireo takelaka amoron-dàlana, ary saika ny ankamaroan'ny trano fisakafoanana dia misy ny mpandeha miarahaba ireo mpizahatany miteny rosianina miaraka amin'ny andian-teny hoe: "Salama, jereo ny menio" (ny sakafo, mazava ho azy, amin'ny teny rosiana ihany koa).
Rosiana marobe no manokatra ny orinasan'izy ireo manokana, matetika amin'ny sehatry ny fizahan-tany.
Saingy ny habetsahan'ny mpizahatany miteny rosianina dia tsy mitranga any amin'ny toeram-pialantsasatra rehetra. Mahalana izy ireo no mankany amin'ny toerana sasany, na dia vitsy aza ny toerana toy izany. Mpizahatany maro avy amin'ny USSR teo aloha no tsy faly amin'ny fahamaroan'ny mpiray tanindrazana eo akaiky eo, na izany aza, ny mpiasa miteny Rosiana amin'ny ambaratonga kely ary ny soratra amin'ny teny rosianina dia manamora ny fiainana any amin'ny firenena vahiny - indrindra ho an'ireo izay tsy manana traikefa be dia be ary tsy dia mahay loatra. ny teny anglisy no raharaha. Ankehitriny ianao dia afaka tonga soa aman-tsara any amin'ireo toeram-pialan-tsasatra Vietnamianina malaza indrindra nefa tsy mahay anglisy. Tsy hisy olana.
Na dia mijanona ho fanjakana sosialista aza i Vietnam amin'ny toerana voafidiny, raha ny tena izy dia izao dia misy kapitalisma "bibidia" bebe kokoa eto amin'ny ambaratonga iray manontolo. Saika kely ny Vietnamianina rehetra farafaharatsiny (amin'ny ankamaroan'ny tranga marobe, mazava ho azy, kely izy io), fa mpandraharaha iray. Samy mivarotra zavatra, manamboatra na manamboatra zavatra (matetika kokoa amin'ny toe-javakanto) ny tsirairay, manome serivisy sasantsasany. Amin'ny ankabeazan'ny trano tsy miankina Vietnamianina misy gorodona 2 na maromaro, dia misy fivarotana na trano fandraisam-bahiny, na atrikasa, na trano hafa eo amin'ny rihana ambany.
Mandritra izany fotoana izany, ny varotra sy ny serivisy nataon'ny Vietnamianina dia matetika manelingelina (ankoatr'izay, ny fametrahana entana na serivisy dia matetika mitranga amin'ny vidiny lafo loatra any Azia Atsinanana). Misy foana ny risika tsy misy finiainiana sy faniriana manokana hividy entana tsy ilaina na mampiasa serivisy ilaina. Fametahana hosoka izany, saingy any Vietnam no fomba mahazatra amin'ny fanaovana asa aman-draharaha. Tsy maintsy miomana aloha ianao mba hiarovana ny tenanao amin'ny loza mitatao toy izany.
Manodidina ny 94 tapitrisa eo ny isan’ny firenena. ary ahitana olona 60 mahery. Ny ankamaroany (manodidina ny 85%) dia Vietnamianina. Manodidina ny 90% n'ny mponina no mifantoka amin'ny lohasahan'ny reniranon'i Mekong sy Hongha, ary koa ny lemaka amoron-dranomasina. Ny isam-ponina dia 248 mponina / sq. km. Ny mponina any ambanivohitra no mibahan-toerana any ho any (manodidina ny 75%).
Fivavahana tany Vietnam
Anisan'ireo mahatoky any Vietnam ny fanjakana Bodista no mandresy. Na izany aza, ny loharanom-baovao sy fandinihana samihafa dia manome tombantombana samy hafa momba ny isan'ireo fitambaran'ny mponina ao aminy (manomboka amin'ny 9% ka hatramin'ny 55% ihany). Mbola any amin'ny firenena dia misy isan-jatony ny katolika kristiana ary ny fiaraha-monina kely avy amin'ny mpanaraka finoana hafa. Mino koa ny finoana nentim-paharazana (animism, ny razana). Na izany aza, loharanom-baovao maro dia manamarika ampahany betsaka amin'ny atheista amin'ny Vietnamese.
Fiteny amin'ny Vietnam
Ny toeran'ny fanjakana dia Vietnamese. Ny ampahany sasany amin'ny mponina amin'ny ambaratonga iray na miteny anglisy, sinoa na frantsay. Ao amin'ny toerana fizahan-tany saika na aiza na aiza dia afaka manazava amin'ny teny anglisy ianao. Ny fiteny Rosiana tato anatin'ny folo taona izay dia efa niasa be ato amin'ity firenena ity. Noho izany, amin'izao fotoana izao amin'ny trano fivahiniana malaza indrindra any Vietnam, ny ankamaroan'ny eo an-toerana dia miteny Rosiana farafaharatsiny eo amin'ny ambaratonga voalohany ary saika ny rehetra mahalala farafaharatsiny teny vitsivitsy amin'ny teny Rosiana.
Ny toetran'ny Vietnam. fizaran-taona
Manodidina ny 1/3 ny faritany Vietnamianina no misy ny haavon'ny 500 m na mihoatra ny haavon'ny ranomasina. Ao ny toetrandro misy karazana subtropika, ary any amin'ireo faritra mihoatra ny 2 000 m ireo ny rivotra dia mihena ny toetrandro. Nanomboka ny volana aprily ka hatramin'ny oktobra dia mitondra hafanana sy hamandoana mankany Vietnam (afa-tsy amin'ireo faritra izay nohamafisin'ny tendrombohitra).
Any amin'ny faritra atsimon'i Vietnam (manomboka ny tanànan'i Ho Chi Minh, mifarana amin'i Phan Thiet) dia vanim-potoana maina sy mando. Ny vanin-taona mando dia manomboka ny volana Mey ka hatramin'ny Novambra, ary ny ankamaroan'ny orana dia manomboka amin'ny volana jona ka hatramin'ny Aogositra. Manomboka ny vanin-taona mafana, mazàna amin'ny volana Desambra, mifarana amin'ny volana aprily. Ho an'ny mpizahatany dia izy no tena manasoa. Ny vanim-potoana faran'izay mpizahatany dia ny volana Janoary sy febroary. Ireny volana izay dia misy rivotra mafana sy rano mangatsiaka. Tamin'ny andro lohataona, misy ny hafanana, saika tsy misy orana. Ankoatr'izay, dia tena tsy fahita firy koa izy ireo amin'ny volana Oktobra sy Novambra.
Ny toetrandro any amin'ny faritra afovoan'ny firenena (manomboka amin'ny toeram-pivarotana Nha Trang, miafara amin'i Hue renivohitra taloha) dia somary hafa kely ihany. Manomboka amin'ny volana febambra ka hatramin'ny Aogositra dia maizina eto, tsy fahita firy ny orana, +32 ny salanisan'ny rivotra amin'ny ankapobeny. Avy ny oram-be matetika amin'ny volana Desambra, ary misy rivo-doza manodidina an'i Hue sy Da Nang tamin'ny Oktobra sy Novambra; ny mari-pana eo amin'ny mari-pana ao amin'ireo faritra ireo dia +24 amin'izao fotoana izao.
Any amin'ny faritra avaratr'i Vietnam (manomboka any Hanoi ka hatrany amin'ny moron-dranomasina halong), ny fizarazaran-taona dia tsapa mihoatra noho ny afovoany sy ny atsimon'ny firenena. Ny vanim-potoana mando dia manomboka amin'ny Novambra ka hatramin'ny Febroary, ary amin'ny Febroary sy Martsa, dia avy foana ny orana, izay antsoina hoe "pound" eto. Amin'ny Mey, ny vanim-potoana mafana dia manomboka amin'ny hamandoana avo sy hafanana mahatratra +40.
Weather in Vietnam (an-tserasera)
Widget ifandraisana miaraka amin'ny toetrandro ankehitriny any Vietnam. Azonao atao ny manova ny sosona ho rivotra, currents, hafanana, kotroka sy ny maro hafa.
Faritra sy fivarotana ao Vietnam
Vietnam Avaratra no tapitra tranainy indrindra amin'ity firenena ity. Ny ankamaroan'ny zavatra manintona dia mifantoka ao, ary koa ny fambolena dite sy kafe ary tahiry. Ny renivohitr'i Vietnam ankehitriny, Hanoi, dia any avaratra ihany koa. Ny fotoana tsara indrindra hitsidihana dia mandritra ny volana lohataona.
Danang. Tetezana volamena. Afovoan'ny vietnam
Ny afovoan'i Vietnam dia manana morontsiraka lava, toetrandro mahafinaritra saika isan-taona, ny sary mahafinaritra indrindra ao amin'ny firenena, ny "fety" fety any Danang ary ny renivohitra fahiny Hue miaraka amin'ireo tempoliny taloha.
Ny faritra atsimo no mandroso ara-toekarena indrindra. Ity no tanàna vietnamiana lehibe indrindra amin'ny tanànan'i Ho Chi Minh misy hotely lafo indrindra, trano fisakafoanana tsara indrindra, fivarotana maro karazana ary tombontsoa sivilizasiôna hafa. Any atsimo dia misy toeram-pialofana malaza - Phu Quoc, Nha Trang ary Phan Thiet.
Fitaterana any Vietnam
Ny fitsangatsanganana ny tanàna iray lehibe Vietnamianina mankany amin'ny iray hafa dia ny fitsangatsanganana an-habakabaka no be mpampiasa, izay tsy lafo eto. Fa afaka miditra fiaran-dalamby mahafatifaty ihany koa ianao amin'ny fametrahana ny asa hafa na lehibe kokoa. Ny fifamoivoizana eo amin'ny fiara fitateram-bahoaka koa dia novolavolaina tsara, saingy io no safidy lava indrindra sy haingana.
Any amin'ny tanàna lehibe rehetra dia misy tambajotra mandrindra ny làlan'ny bus. Ny saran-dàlana dia 4 dong. Ny taxis koa novolavolainy tsara (fiara mahazatra sy mopna). Ao koa ny resaka voatrobaka.
Mpitaingina bisikileta any Vietnam
Fifanakalozana vola sy fifanakalozana any Vietnam
Ny vola ao Vietnam. Dong
Ny vola Vietnam dia dong. Amin'ny fomba ofisialy, 1 dong dia mizara ho 10 hao na 100 sous, fa raha ny tena izy, ny "fanovana kely" dia tsy nampiasaina nandritra ny fotoana lava noho ny fiakaran'ny vidim-piainana. Azonao atao ny mahita ny tahan'ny Dong mifandraika amin'ny vola rehetra amin'ny currency converter-calculator etsy ambany. Mifandray tanteraka izy io ary mandray ny tahan'ny fifanakalozana ankehitriny.
Mpanova Vola Ny dolara any Vietnam ankehitriny
Aiza ny fanovana vola any Vietnam
Tsara kokoa ny maka dolara amin'ny vola mandritra ny dia mankany Vietnam, amin'ny toe-javatra tafahoatra - euro. Ny robla rosiana dia ekena amin'ny toerana tena vitsy, ary na dia izany aza - amin'ny tahan'ny biby mpiremby. Ny fifanakalozam-bola dia azo atao any amin'ny banky, ny birao fifanakalozana tsirairay, ny seranam-piaramanidina ary ny fivarotana sasany.
Sarintany manintona sy morontsiraka any Vietnam
Angamba mety hahaliana anao ny lahatsoratro - Toerana 12 fitsidihana tsara indrindra any Vietnam
Ho an'ireo izay handeha Hue. Mety hahasoa ity lahatsoratra ity: Toerana mahafinaritra 10 hitsidika an'i Hue, Vietnam
Ary ity misy lahatsoratra iray ho an'ireo izay handeha ho any Nha Trang: Zavatra 12 mahafinaritra indrindra azo atao any Nha Trang, Vietnam
Raha mikasa ny hitsidika ny Halong Bay ianao dia mety hahaliana anao ity lahatsoratra ity: Ny zavatra 11 tsara indrindra hatao any Halong Bay - TripAdvisor
Ary ity misy lahatsoratra iray momba ny tanànan'i Sapa any avaratry Vietnam: Top 10 zavatra tokony hatao any Sapa, Vietnam
Toerana manaitra ...
Lahatsoratra iray momba ny tanànan'i Ho Chi Minh: Fitsidihana mahaliana 10 ao amin'ny tanànan'i Ho Chi Minh